Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn la beegsaday Al Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn la beegsaday Al Shabaab
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ayaa Isniintii ina dhaaftay Duqeyn la beegsaday saldhig Ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin meel 50-KM uga beegan Waqooyi Magaalada Kismaayo.
Mareykanka qoraalkiisa kuma aanu sheegin khasaare nafeed oo ururka Al-shabaab ay ku gaarsiiyeen Duqeyntan, balse wuxuu tilmaamay inuu wado baaritaanada la xiriira weerarkan, si khasaaraha ka dhashay loo ogaado.
Taliska Mareykanka Afrika ee AFRICOM ayaa sidoo kale sheegay Duqeyntan oo dhacday weerarkii Baar-sanguuni kadib Isniintii ina dhaaftay inay ka dhacday meel ku dhaw goobtii lagu dilay askari Mareykan ahaa, bishii June ee sanadkan.
“Iyadoo la kaashanayo Dowladda Soomaaliya, ciidamada Maraykanku waxay sameeyeen duullaan ay ku bartilmaameedsadeen Al Shabaab, meel 50-KM Waqooyi kaga aadan, waxaan wadnaa baaritaanada la xiriira weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay.” Waxaa sidaasi CNN u sheegay Maj. Karl Wiest oo ah afhayeen u hadlay Taliska Mareykanka.
Waa duqyantii 14-aad ee Maraykanku sannadkan ka gaystaan gudaha Soomaaliya taasi oo bartilmaameeedsatay xoogag ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Mareykanka ayaa horay u sheegay in ay ka go’an tahay dagaalka kooxaha ka dagaalama Soomaaliya sida kooxda yar ee Daacish iyo Ururka Al Shabaab ee ku sugan meelo ka mid ah dalka, kuwaasi oo dagaal kula jira dowladda federaalka.